विश्वमा इन्टरपोलले ६८ नेपालीलाई किन खोजी गर्दैछ ? - Himalayan Kangaroo
विश्वमा इन्टरपोलले ६८ नेपालीलाई किन खोजी गर्दैछ ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० कार्तिक २०७२, सोमबार ०२:०३ |
काठमाडौँ । अमेरिकामा गम्भीर अपराध गरेर फरार भएका पाँच नेपालीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको छ ।
विभिन्न मितिमा अपराध गरेका नेपालीविरुद्ध जुनसुकै देशमा पनि पक्राउ गर्नसक्ने गरी रेडकर्नर नोटिस जारी भएको हो । पछिल्लोपटक नेपाली युवक उमेश सापकोटाविरुद्ध अमेरिकन प्रहरीको सिफारिसमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ ।
एक महिलालाई सहयोग गर्ने बहानामा उनको अपार्टमेन्टमा पुगी महिलाको बच्चालाई एउटा कोठामा थुनेर उनले बलात्कार गरेको प्रहरीको दाबी छ । उनी २० मार्च २०१४ मा पक्राउ परेकोमा १० अप्रिल २०१४ मा छुटेका थिए । उनको शरीरमा ट्रयाक गर्न मिल्ने गरी मोनिटर राखिएकोमा उक्त मोनिटर नचल्ने बनाएर उनी फरार भएका हुन् । ट्राभिस राज्यको अदालतले ७ मे २०१४ मा उनीविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेकोमा २१ जनवरी २०१५ मा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको हो ।
त्यस्तै, अन्य चारजना नेपाली पहिलेदेखि नै अमेरिकामा रेडकर्नर नोटिसमा परेका छन् । मदिरा पिएर गाडी चलाउँदा दुर्घटनामा परी एकजनाको मृत्यु भएको अपराधमा साजन तिमल्सिना पाँच वर्षदेखि रेडकर्नर नोटिसमा छन् । एक महिलालाई चिठ्ठा नपरेको भनेर झुक्याएर उनलाई परेको चिठ्ठाको रकम आफूले लिएर ठगी गर्ने पंकज जोशीविरुद्ध पनि रेडकर्नर नोटिस जारी भएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । उनको बारेमा नेपालमा समेत अनुसन्धान भएको थियो ।
उनले अमेरिकाबाट पठाएको केही पैसा अहिलेसम्म रोक्का छ । बालबालिकालाई यौन दुव्र्यवहार गरेको अपराधमा अभिषेक सिंह तथा लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा जोन गुरुङलाई पनि अमेरिकन प्रहरीको सिफारिसमा रेडकर्नर नोटिस जारी भएको छ ।
Previousहप्तामा १८ घण्टा मात्र लोडसेडिङ
Nextसरकार आफैंले किन लुकाउदै छ टीकापुर प्रतिवेदन ?
अमेरिकाका नौ जना नेपालीलाई नेपाल सरकारद्वारा “भानुभक्त स्वर्ण पदक” प्रदान
२२ श्रावण २०७१, बिहीबार ०६:३८
सिक्कामा नेपालको नयाँ संविधान
२५ चैत्र २०७२, बिहीबार ०१:२१
भूकम्पको अढाइ वर्षपछि सिंहदरबार पुनर्निर्माणको सुरसार
१ आश्विन २०७४, आईतवार ००:५७
सीके राउत र नेकपाबीच रहस्यमयी गठबन्धन : राउतलाई राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गर्ने योजना
२ पुष २०७६, बुधबार ०२:४८